Ndeipi nzira dzokuvaka backlinks nokukurumidza?
Chivakwa chekubatana ndicho chakakosha uye chinonyanya kukosha chekutsvaga injini. Iyo inokanganisa nzvimbo yewebsite yakatarisa nzvimbo uye inoita Google maonero pamusoro peimwe nzvimbo. Basa rekubatanidza kweSENO rakaratidzwa munhamba yezvinhu zvinongororwa zvidzidzo - custom printed toothbrushes.
Zvisinei, vamwe webmasters vanoramba vasina chokwadi pamusoro pemigumisiro uye zvibatsiro zvekubatanidzwa kwepakati. Vanotaura kuti kutenderera kweGoogle kumashure ekudzokera shure kuri kuderera. Zvisinei, ndinoda kuatora ikoko. Backlinks haigoni kuparara chero nguva pfupi pavanenge vachiita basa rinokosha muGoogle kushandiswa kwegorgorithm. Idzo zvidzidzo zvenguva pfupi dzinoratidza kuti nhamba yemadzinesi anowirirana ne peji inoratidzirana neyezvikwata kupfuura zvimwe zvikonzero. Kana iwe usingatori deta iyi zvakanyanyisa, edza kutsvakurudza iwe pachako. Isai chinyorwa chenyu chakakonzerwa muna Semalt Web Analyzer uye tarisa mapeji epamusoro. Vose vane zvizhinji zvekubatanidzwa. Kunyange kana shoko rako rakakosha risina kunyanya kukwikwidzana, TOP ranking webhusaiti ichava nehuwandu hune hutano.
Muchikamu chino, tichakurukura maitiro ekuvaka backlinks nokukurumidza uye zvinobudirira. Isu tashandisa dzimwe dzezvikwata zvekugadzira mazano ekusimudzira nzvimbo yekambani yekombiji yepamusoro. Takawana mhinduro dzakanaka uye takawedzera hukama hwemapurogiramu evatengi vedu.
Saka, ngatiendei! Tarisira ruzivo urwu ruchaita kuti iwe uwane hutano hwehutano huno panzvimbo yako.
Nzira dzinogadziriswa dzokuvaka backlinks nokukurumidza uye dzinoshanda
mutongi, mawebsite akabatana newe munguva yakapfuura anowanzoita izvi zvakare. Vanozviita nokuti vatove vatevedzeri vezvauri kuita nekunyora. Vangangove vangave vanofarira mune zvinyorwa zvitsva zvaunoshandura uye zvakabatana nazvo. Mufananidzo uyo une database yehuwandu hwehutachiona hwave huchibatanidza kwauri, uye, saka, unogona kuva nehanya nehupenyu hwako hutsva. Hazvina mubvunzo kuti ichange iine masimba ane simba zvebhizimusi rako rekutsvaga sezvo iwe unogona kuwana kupera kwakasimba kwekuuya kwechiteshi kunzvimbo yako.
Unogona kuvaka database yakadaro kushandisa Google CSE. Chinhu chose chaunoda ndechokutevera matanho aya:
Tsvaga webhu hutsva huri kutobatanidza kwauri;
Chengetedza mabhuku aya kuva injini yekutsvaga tsika;
Tsvaga chikwata chinotarisira zvenguva yemberi.
Isa kune imwe yeCSE yeCSE yegadziriro uye ugadzire injini itsva yekutsvakira ikoko. Zvino shandisa webhusaiti iwe waunoda kuitsvaga uye zita rako rekutsvaga injini itsva. Dzokera kune imwe inotevera tab uye ona kukosha muchitokisi A1. Inofanira kuenzaniswa se "domain. com. "Iwe unofanidza kunyora pasi deta iyi mune" nzvimbo dzekutsvaga "chikamu pane yako yekutsvaga injini yekuchengetedza. Uye pakupedzisira, chengetedza "ita" bhatani.
Zvisinei, kana iwe uchida kutsvaga mazita akawanda kubva muhutano hwako we backlink, unoda kuwedzera nzvimbo yekugara yaunayo. Ndicho chikonzero iwe unoda kuvhara pa "edit search engine" uye uwedzere mamwe mawebsite. Iwe unogona kusarudza sarudzo "kuwedzera mawebhusayithi akawanda" uye ukopa mazita emadeni mubhokisi. Sarudza basa "rinosanganisira mapeji ose pane idzi masayiti" uye chengeta "ponesa. "
Iyezvino, injini yako yekutsvaga yakagadzirira. Unogona kuishandisa kutsvaga chikwata chekuvaka chikwata chero nguva iwe uchidhinda chigamba chitsva chezvinhu.
Iyi tsananguro yekuvaka inogona kuve yakanyatsobudirira kana unhu hwekubatanidza huri kukura nokuti une dhesi yakawanda yehutori hwehutsvaga kutsvaga.